I-MAYORAZGO: I-CASA MONTES. INTABA YASEPALENTINE
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguLaurentino
I-El Mayorazgo yindawo yokhenketho yasemaphandleni eyenziwe zizindlu ezintathu ezirentwayo ezigcweleyo, ezibekwe kwesinye sezona zakhiwo zikhethekileyo eCordovilla de Aguilar apho ithatha khona igama layo. Imvelaphi ukusuka kwinkulungwane yeshumi elinesixhenxe, ngumxube ontsonkothileyo wezakhiwo ezamkela zonke izinto ezisetyenziswayo kunye neemfuno zezolimo zasemaphandleni kunye noqoqosho lwemfuyo lwale ndawo. Ukuvuselelwa ngononophelo kuye kwavelisa izindlu ezintathu ezinobuntu obahluke kakhulu, ngokusekelwe kwinguqu ehloniphekileyo.
Indlu yaseMontes, eyayifudula isetyenziswa njengendawo yokugcina iimpahla kunye ne-hayloft, yacebisa ukuvuselelwa ngentlonipho enkulu ngemvelaphi yayo. Inendawo enemisebenzi emininzi ehlala igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela kunye nekhitshi phantsi kwesakhiwo esimangalisayo sophahla lwamaplanga, inika iimbono zomnye wemithi ye-oki ejikeleze idolophu.
-6 izihlalo (7 ezinebhedi eyongezelelweyo)
-Igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini.
-Amagumbi okulala amabini aneebhedi ezimbini zomntu omnye.
-Igumbi lokuhlala-igumbi lokutyela-ikhitshi.
- 3 amagumbi okuhlambela agcweleyo.
ICordovilla de Aguilar yilali encinci yeentaba ebekwe ngaphantsi kwemizuzu elishumi ukusuka kwinucleus ephambili yommandla, iAguilar de Campoo. Ngemihla yayo yayinabemi abasondele kwikhulu labantu abazinikele kwimisebenzi yezolimo nemfuyo, kodwa namhlanje asifikeleli kwabalishumi elinesihlanu abahlala apha unyaka wonke. Ijikelezwe yimithi yom-oki, yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla nokuhamba-hamba kwiindledlana zayo ezimnandi nezifikelelekayo, ezinye zazo ziphawulwe ngeendlela ezibangela umdla. Abantwana bayonwabela ngakumbi iCordovilla, ukongeza kwibala lokudlala, izitrato zayo ezingenazo itrafikhi kunye namadlelo edolophu zikulungele ukudlala ngokukhuselekileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Laurentino
Ngexesha lokuhlala komthengi, bobabini uRosa kunye noTino bayakuvuyela ukukunceda ngayo nantoni na oyifunayo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cordovilla de Aguilar